Yini i-Buffalo Hump nokuthi iqedwa kanjani | Bezzia
UToñy Torres | 20/07/2021 20:00 | Amathiphu ezempilo
Ngokukhula komzimba uyashintsha, kwesinye isikhathi ungenakuguqulwa futhi ngaphezu kwakho konke, ngaphandle kokukuqaphela lokho. Olunye lwalezo zinguquko ezivame ukwenzeka ukuvela kohlobo lwe-hump endaweni yentamo. Igama lakhe langempela yi-kyphosis yomlomo wesibeletho, yize yaziwa nangokuthi yiBuffalo Hump.
Ngabe unaleli bhuma elincane entanyeni yakho futhi awazi ukuthi yini okufanele uyenze ukuyisusa? Sizokutshela khona manjalo ukuthi kungani iphuma, indlela yokuyiqeda nokuzivocavoca umzimba ongakwenza ukuze uthuthukise ukuma komzimba kusuka emhlane wakho. Yize kungesona isifo esibi, kungakhathaza lapho wenza ukunyakaza okuthile.
Ngiyazi ukuthi kungani kukuhlupha ezingeni lobuhle, ngoba kukhiqiza ukungakhululeki emuva noma ngoba kumane kuvimbele ukuma kwakho ukuthi kungabi okulungile, sikufundisa ukuthi ungayilungisa kanjani le nkinga. Thola ukuthi yini i-Buffalo Hump, ukuthi ungayilungisa kanjani futhi yini okufanele uyenze ukuyivimba ukuthi ingaphinde ivele.
1 Yini iqhubu lenyathi
2 Ungayisusa kanjani i-Buffalo Hump
Yini iqhubu lenyathi
I-Buffalo Hump ibonakala ngokuvela kwesigaxa noma indawo egobile endaweni yentamo. Lolu hlobo lwe-hump, Ikhiqizwa ngokunqwabelana kwamafutha, yize futhi kungadalwa yizifo okubi kakhulu, njenge-osteoporosis. Yize ezimweni zezifo ngaphezu kwe-hump, ezinye izimpawu ziyavela, ngakho-ke akufanele ngaso sonke isikhathi zihlotshaniswe nokuthile okubucayi.
Noma kunjalo, i-Buffalo Hump ingahlukaniswa ngezici ezilandelayo:
Ukukhuluphala ngokweqile: Njengoba ubonile, i-Buffalo Hump ivela ngenxa yokuqongelelwa kwamafutha, ngakho-ke abantu abakhuluphele ngokweqile noma abakhuluphele kakhulu basengozini enkulu yokuthola lokho.
Ukusetshenziswa kwemithi ethile: Ukwelashwa kwesikhathi eside ngezidakamizwa ze-glucocorticoid, okungukuthi, i-cortisone.
Ifa lokuzalwa: Yebo othile emndenini wakho unenyathi, kungenzeka ukuthi nawe ube nayo.
Ukuma okungalungileUkuma okungalungile komgogodla kuyinto esinye sezizathu eziyinhloko amafutha aqoqana ngawo kuleyo ndawo yentamo. Ukuyilungisa kungakusiza ukuyisusa.
Ungayisusa kanjani i-Buffalo Hump
Kunezindlela zokwelapha ezahlukahlukene zokususa iBuffalo Hump, kufaka phakathi i-liposuction ukususa amafutha asendaweni. Noma kunjalo, isinyathelo sokuqala thola imbangela bese uqala ukwelapha i-hump emthonjeni wayo. Uma kuyisimo sokukhuluphala ngokweqile, into yokuqala ukuqala ngokudla okunempilo, ngokufanelekile ngaphansi kokuqondiswa kokondla umzimba.
Ezimweni lapho imbangela isesimweni esingesihle, izikhathi ezibalulekile nodokotela owelapha ngokomzimba zibalulekile. Njengoba ngaphezu kokukusiza ukulungisa i-Buffalo Hump, izokunikeza imihlahlandlela nokuzivocavoca ukulungisa ukuma nokuvikela ukuvela kwayo ngokuzayo. Ngokuqondene namacala ahlobene nokwelashwa, kubalulekile ukuya ehhovisi lochwepheshe ukuthola enye indlela.
Ngaphezu kokulashwa ngobuhle, kukhona okuqinisekile izivivinyo eziphumelela kakhulu ukuqeda i-buffalo hump.
Ukuphakamisa isifubaLala phansi emethini bese ubeka izingalo zakho ezinhlangothini zomzimba wakho nge-engela engu-45 degree izintende zibheke phezulu. Nweba umgogodla wakho ngangokunokwenzeka, ucindezele umhlane wakho phansi. Manje, phakamisa isifuba sakho ngenkathi ucindezela amahlombe akho ehlombe. Bamba lesi sikhundla imizuzwana eyi-10 bese ubuyela endaweni yokuqala. Yenza ukuzivocavoca ngamasethi amabili okuphindaphinda okungu-10.
Ukuphakamisa ingalo: Cindezela umzimba wakho ngodonga, ikhanda, amahlombe, izithende kanye nesifuba kahle odongeni. Phakamisa izingalo zakho ngokuzihambisa phezu kodonga, zize zilingane namahlombe akho. Ngenkathi wenza lo msebenzi, akufanele ukhothamise ikhanda lakho noma uhambise amahlombe akhoNgale ndlela uzokugwema ukulimala. Yenza amasethi amabili we-10 reps njalo.
Ukwenza lezi zivivinyo nsuku zonke kuzokusiza ukuthi uthuthukise ukuma kwakho futhi unciphise iBuffalo Hump kancane kancane. Uma futhi ungeza ukuzivocavoca okuphelele usuku ngalunye, njengokuhamba, ukuhamba ngebhayisikili noma ukubhukuda, uzokwehlisa isisindo ngendlela ejwayelekile. Okufaka isandla ekunyamalaleni kokuqongelela kwamafutha ezindaweni ezifana nasentanyeni. Nakekela ukudla okudlayo nokuzivocavoca umzimba njalo, umzimba wakho uzokuthokozela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Kuyini iBuffalo Hump nokuthi ungayiqeda kanjani
Ingozi yothando lwehaba